IHostela – The Ulwazi Programme
Umabonakude uyingxenye enkulu yezimpilo zethu, singakusho kugcwale umlomo nje kahle kahle esikhathini samanje mincane kakhulu imndeni enganawo umabonakude, usufana nokudla esikudlayo namanzi esiwaphuzayo. Ukuba khona kuka mabonakude kusho ukuthi ziningi nezinhlelo ezikhona ezikhonjiswa abantu eziveza izindawo ezahlukene, ukuphila kwabantu ngokuhluka kwabo, izinhlelo zamasiko kanye nemilando. Uhlelo oludla ubhedu kulezi zinsuku noma ziningi ezinye ezisemgangathweni uhlelo luka mabonakude olubizwa ngokuthi iHostela. Lolu uhlelo olukhombisa kakhulu ngempilo nangokuhlala kwabantu abampisholo khona emahostela ikakhulukazi emahostela ahlala abendlu yesizwe sikaPhunga noMageba sesisho isizwe samaZulu. Noma lona kungumdlalo wokubukiswa futhi oshicelelwe kepha kukhona la osika khona udlubu ekhasini usikhombise nje kancane ngohlobo lwempilo ephilwa ehostela. Kulengosi yethu sithi ake siqobe amaqatha ambalwa siyiphake ngezithebe siphakale abantu mayelana nomlando wawo amahostela. Lapha sizobala ukuthi aqalwa kanjani, kwakuyini inhloso yawo kanye nokuthi aseshintshe kanjani ukusebenza kwawo ngokuhamba kweminyaka ngoba phela manje akufani nasemandulo, ukufika nokwakhiwa kwawo.
Ukukwakhiwa kwamahostela kwakungesikho ukuthi kuzakhelwa nje izindlu, kepha umqondo kwawo ufike namaNgisi ngoba enzela ukuthi abasebenzi basemasimini babe seduze nalapho abasebenzela khona. Ukwakhiwa ke kwamahostela kwakufana nokuthi ila khona abantu abampisholo ababoshelwe khona ngoba phela impilo yakhona ibicishe ifane nalena yokuboshwa ngesikhathi sobandlululo. Amahostela afana nalawa akwaMashu nakoMlazi ayefana nse nejele ngoba phela abantu babekukhokhela ukuhlala kuwo baphinde bakhokhele nezokuphepha khona lapho, ngisho nendlela akhiwe ngawo lamahostela ayesidicilela phansi isithunzi sabantu abahlala khona ngoba izindlu zakhona zincane ngendlela eyisimanga futhi azikhelwe ukuthi uhlale unethezeke khona. Emlandweni siyathola ukuthi amabutho amaNgisi ngonyaka ka-1878 ayehlela ukuhlakaza amabutho kaZulu awahlukanise Phakathi lokhu okwandulela ekutheni kwakhiwe amahostela abizwa ngokuthi ama “barracks” azohlala abantu abangamakhulu amabili bezosebenza ezindaweni eziseThekwini namaphethelo.
Categories News Tags iHostela, Mabonakude